महिलाले सेक्स गर्ने बेला राख्ने ५ अचम्मका चाहनाहरू ! पुरुषले जान्नै पर्ने कुरा ?::Digital News Paper
महिलाले सेक्स गर्ने बेला राख्ने ५ अचम्मका चाहनाहरू ! पुरुषले जान्नै पर्ने कुरा ?
प्रकाशित मिति :मङ्लबार, जेष्ठ २८, २०७६ Tuesday, June 11th, 2019
एजेन्सी – महिलाहरू जीवनमा केही न केही फरक खालको सेक्स अनुभव गर्न चाहने एक अध्ययनले देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो–अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । युवतीहरुले यौनको बारेमा कस्ता–कस्ता कुरा सोच्छन् भन्ने विषयको अध्ययनको निष्कर्ष यस्तो छः
१ निर्वस्त्र हुने चाहना : महिलाहरु पुरुषको अगाडी कपडा खोल्न लाज मान्छन्। तर, उनको चाहना पार्टनरले नै कपडा खोलिदियोस भन्ने हुन्छ। हिल चप्पल लगाएको बेला होस् या सेक्सी लाञ्जरी महिलाहरुलाई यस्तो चाहना बढी हुन्छ।
२ चरम सन्तुष्टिको चाहना : महिलाहरु हरेक पटक चरम सन्तुष्टिको यौन सम्बन्धबारे सोच्छन्। तर, सधै यस्तो वास्तविक जीवनमा भने नहुन पनि सक्छ।
￼३ आत्मसमर्पण : अधिकांश महिलालाई अपेक्षा हुन्छ कि कुनै पनि पुरुषले उनीसँग मालिक जस्तो व्यवहार गरोस् । उठाएर ओच्छ्यानमा ल्याओस र कपडा खोलेर क्रिडा गरोस्। अलि हेप्ने र होच्याए जस्तो गर्ने पुरुषसँग सेक्सका लागि महिला लालायित हुन्छन्।
४ भूमिका परिवर्तन: महिलाहरु सामान्यतः निष्क्रिय हुन्छन्। तर, कहिले काहीँ महिलालाई पुरुष जस्तै सक्रिय भएर यौन क्रिडामा सहभागी हुन मन लाग्छ।
५ अपरिचितसँग सेक्स : अधिकांश महिलालाई अपरिचित पुरुषले छुँदा नराम्रो लाग्छ । तर, कतिपय समयमा अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्ने विषयमा महिलाहरु उत्तेजित हुन्छन् । अध्ययनले भन्छ, ‘अपिरिचितसँग यौन सम्बन्ध राख्दा सबै सीमा भुलेर रमाइलो गर्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ हन्छ।’